DHEGEYSO-Xildhibaan Dalxa oo kahadlay deegaamada ciidanka Itoobiya ka bexeen. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Xildhibaan Dalxa oo kahadlay deegaamada ciidanka Itoobiya ka bexeen.
Nofeembar 1, 2016 1:14 b 0
Muqdisho, Novb 01 2016–Labadii asbuuc ee la soo dhaafay , ciidamada Itoobiya waxay banneeyeen fariisimo dhowr ah oo ay ku lahaayeen bartamaha iyo Koofurta Soomaaliya, waxaana ay sababtay in deegaano cusub ay Alshabaab qabsadaan iyo in meelaha qaar amni xumo laga soo sheego.
Ka bixitaankaasi waxa uu saameeyay qaar ka mid ah maamul gobolaadeyada oo deegaano ay maamuli lahaayeen hadda gacantooda ka baxay, gobolka Bakool degmooyiin ka tirsan ayaa ka mid ah goobaha ay ka bexeen Itoobiyaanka.
Xildhibaan Maxamed cumar dalxa oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka arimaha dibada baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay idaacada danan ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in iska warqab la,aan ay sabab u tahay ka bixitaanka ciidamada itoobia oo maalmihii lasoo dhaafay baneenaye deegaano muhiim ah.
Gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya oo war cusub soo saaray.